Mitsangana amin’ny aretina | NewsMada
Mitsangana amin’ny aretina
Par Taratra sur 03/04/2021
Ao anatin’ny fankalazana ny Paska na ny Paka izao: fahatsiarovana ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty ho famonjena ho an’izay mino fa Izy no Tompo sy Mpamonjy. Tsy toy ny tamin’ny taon-dasa. Amin’izao, mivoha ny fiangonana. Toy izany koa ny fon’ny tsirairay? Mba tsy ao anatin’ny fihibohana… Misokatra ho an’ny hafa izany; eny, na eo aza ny karazana fahasahiranana, ny sakantsakana, ny fepetra… Na izany aza, mbola ao anatin’ny ady tanteraka izao amin’ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa: ady fiady, ady tsy vita. Mafimafy no ho ny teo aloha aza…
Tsy azo odian-tsy na tamoraina ary ampahatsiahivina ihany: mahery vaika ny fisehon’ny aretina, haingana be ny fifindrany… Tsy vitan’izay, mety hamitaka aza: misy tsy ahitana soratr’aretina, ohatra, nefa mitondra tsimokaretina; na ahitana soratr’aretina na efa marary, nefa tsy ahitana tsimokaretina na anaovana fitiliana sy zahana izao aza. Izany ny anisan’ny mampitombo isa haingana be ny tranga vaovao amin’ny fitondrana tsimokaretina amin’izao? Na ny marary ao anatin’ny fahasarotana; eny, na ny marary mamoy ny ainy aza. Mila fitandremana, fahamailoana…
Amin’izao Paska na Paka izao, tsaroana hatrany toy ny isan-taona ny hoe fitsanganana amin’ny maty. Mby ao anaty ary miara-dalana amin’izany ny fitsanganana ara-panahy? Fahavelomana vaovao, famonjena… Ary ny ara-nofo amin’ny maha olombelona amin’izao fihanaky ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa izao? Mila fitsanganana fa tsy fitsangantsanganana… mahazatra. Tsy inona fa fifohazan-tsaina amin’ny fiatrehana ny ady amin’ny aretina, fahasarotana, fahafatesana. Mila mitsangana ny tena: miaro tena mialoha fa tsy miandry hotafihin’ny aretina.
Tsy miandriandry na mandrimandry amin’ny aretina izany fa manao izay tsy maintsy atao hatrany: miaro tena, manatona mpitsabo raha mahita na mahatsiaro ho tsy metimety, manaraka fitsaboana. Izay ny ahazoana mitsangana amin’ny aretina? Hatramin’ny farany, tsy manaiky ho lavo amin’izao. Fahatsiarovan-tena amin’izany izao Paska na Paka izao?